GNU Linux-Libre 5.16 kernel yakaburitswa | Linux Addicts
Sezvaunonyatsoziva, iyo vanilla Linux kernel, iyo iri pa kernel.org, inonyanya kuvhurika sosi uye yemahara, asi kune zvimwe zvikamu, senge zvimwe firmware uye mamwe madhiraivha anowedzerwa nevechitatu mapato, ari evaridzi, akavharwa sosi. Nekudaro, kune avo vasingade iwo mabhinari blobs, kune "yakachena" uye 100% yemahara vhezheni inoburitswa nguva nenguva neazvino kernel shanduro. Ndezve GNU Linux-Mahara.
Alexandre Oliva akazivisa kuburitswa uku, saka, kwatova pakati pedu GNU Linux-Mahara 5.16. Iyo iine Linux 5.16 kernel ine izvo zvisiri zvemahara zvikamu zvakacheneswa uye kutsiviwa neakasununguka. MaBlogs akaita semt7921s uye rtw89 (8852a) WiFi driver, ili210x touchscreen driver, i.MX DSP Remoteproc, qdsp6 audio driver, uye vamwe vamwe kubva kuARM64 architecture (AArch64) abviswa.
Kunze kwekuchinja uku kuita Linux 5.16 ive yemahara kernel, GNU Linux-Libre 5.16. hauna kusiya chero maficha uye zvigadziriso zvakaunzwa muiyo kumusoro vhezheni, zvakadai se futex2 kuti ikurumidze mitambo yemavhidhiyo neWINE, tsigiro yeAMX (Intel Advanced Matrix Extensions), zvinhu zvitsva nekuvandudzwa kwemafaira masisitimu, AMT (Automatic Multicast Tunneling) tsigiro, update yeZstd (Zstandard) compression, tsigiro yeQualcomm Snapdragon SoCs 690. , zvigamba zvitsva zvekuchengetedza zvakawedzerwa kune iyi vhezheni, nezvimwe.
Iyi GNU Linux-Libre kernel inogona kuiswa pane chero kugovera, kunyangwe kuitira nyore, vagadziri veiyi kernel shanduko vanopawo. mabhinari mapakeji eDebian masisitimu uye zvinobva, pamwe neRed Hat uye zvinobva. Nenzira iyi, iwe unodzivirira kudhawunirodha masosi, kurongedza, kuunganidza uye kuisa iyo yakawanikwa mabhinari, sezvo uchigona kushandisa epakeji manejimendi maturusi ekumisikidza.
Rumwe ruzivo nezve GNU Linux-Libre - Saiti yepamutemo yeprojekti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » GNU Linux-Libre kernel 5.16 yakaburitswa